मन्त्री खतिवडाको पद धरापमा, को होला अबको अर्थमन्त्री ? « Pen Nepal
मन्त्री खतिवडाको पद धरापमा, को होला अबको अर्थमन्त्री ?
Published On : 26 August, 2020 10:30 am By : पेननेपाल
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलो सेलाउँदै जाँदा अर्थमन्त्रीको युवराज खतिवडाको मन्त्री पद भने धरापमा पर्ने देखिएको छ । पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले नरुचाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल रुचीका कारण पछिल्लो अवधिमा अर्थसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका खतिवडा अबको १० दिनभित्र भूतपूर्व मन्त्री हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।
फागुन २० गते दोस्रो पटक मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका खतिवडाले संघीय संसदको सदस्य नरहेर अबको १० दिन मात्रै काम गर्न पाउँछन् । संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार उनलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको १० दिनभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभाको एक जना रिक्त सदस्यका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर यो सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ ।
नेकपाको कार्यदलको प्रतिवेदनले संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको एजेन्डा समेत औपचारिक रूपमा अघि सारेको छ । कार्यदलमा रहेका सदस्यमध्ये नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबाहेक अन्य नेताहरु सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तो अवस्थामा जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सरकारमा सहभागी हुनेछन् । त्यसबाहेक वामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभामा सदस्य भएर बाँकी कार्यकालका लागि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहेको चर्चा छ ।